Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera! Tokony mbola mandeha ireo rohy fangalana ilay Baiboly. Miarahaba tompoko, efa nahazo teo aloha ary afa-po fa nohanin’ny virus ilay izy, dia mba maniry ny hahazo indray nefa ohatrany tsy tafiditra mihitsy. Ny Baiboliko est un logiciel de concordance biblique. Ny Tompo anie homba anao hatrany amin’izay kasainao atao rehetra! Isaorana ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono ho aho, izy io ve compatible am window 10? Tsy mikatona mihintsy izy io rabefa:
Ity Misy lien azo hi-télécharger – na azy raha mety aminao. Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera! Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Miarahaba tompoko, ndrao misy manana solfa fihirana fanampiny kay amin’tsika ato azafady, ito ny adresse email-ko herjessramamonjisoa gmail.
Izaho afaka manampy anao raha misy zavatra mqlagasy anao momba ny Baiboly gasysoft: RAha sendra tsy lasasatria mavesatra dia ity ny lien mora ahafahana mitéléchérger azy sady malaky be. Faly aho fa manana ny Baiboly ho isan’ny fitaovana ampiasaiko isan’andro ato amin’ny solosaina.
Mba alefaso mail cyraique. Ny fihirana mbola tsy nisy fa vao eo am-panamboarana mihitsy. Voaray ny adiresinao fa miezaka ny mandefa an’ilay logiciel a zao. Ny Tompo anie homba anao hatrany malagssy kasainao atao rehetra!
Maiarahaba anao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Averiko eto indray ilay izy:.
Faly miarahaba antsika rehetra. Tsara be sy manampy o Misaotra Répondre. Bjr, za zany miasa amin’ny orin’asa iray e! Raha mba mety tompoko dia mba alefa ty adresse ty doinfographist gmail. Ity ny adresse mail: Ity Misy lien azo hi-télécharger – na azy raha mety aminao.
Salama tompoko, ahoana kay no mba hahazoana ma,agasy Baiboly version complète? Mankahery anao hatranihatrany fa asa masina izao ataonao izao fa mizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ny olona rehera! Isaorana ianareo rehetra izay nifarimbola; Mankasitra Hono ho aho, izy io ve compatible am window 10?
Ho tahian’Andriamanitra isika rehetra indrindra izay nahatotosa izay sanga n’asa tsara izao. Manahona Tompokoba maniry izay ba ho afaka ampiasaina amin’ny macbook ihany koa ny baiboly malagasy Répondre. Baibolt vous permet aussi de faire des recherches par verset ou par mots clés.
Manahoana i Sissy, Asa na efa nahazo ilay logiciel Baiboliko 3. Samy hotahian’i Jesosy daholo indrindra fa ianao izay nanao ity logiciel ity.
Tena sambatra, misaotra an’ mpanambotra de misaotra an’ Jesosy Kristy Tompo, ho Azy irery anie ny voninahitra, maranata Répondre. GasySoft Antananarivo Madagasikara gasysoft gmail. Vao nanandrana naka aho teo fa nahazo. Tena tsara tokoa ny hetahetanao. Mitelecharger ity baiboliko ity aho fa tsy mety kanefa teo aloha aho toa nety ihany fa inona no tokony bajboly azafady indrindra.
Dia misaotra mialoha sahady ho an’izay mamaly dia samy ho tahian’Andriamanitra isika rehetra e! Vous pouvez aussi lire la Bible en 3 langues malagqsy Bonjour, mila namana tena efa nandray ny tompoafaka mahita ve rabefa: Mandehana ao amin’ny lien Mana isan’andro fa misy zavatra mahasoa isan’andro ao.